Publication 6: Sida Kor Loogu Qaado Xaalada Cadaaladeed ee Dadka ku Jira Xabsiyada - Hassan Addow Isak
Dadka ku xidhan xabsiyada, waa bulsho ku dhaqan guud ahaan deggaanada ay deggen yihiin dadka afsomaaliga ku hadlaa, Waa bulsho la nool tacadiyo iyo dhibaatooyiin fara badan. Hadda-ba si loo ogaado dhibtan faraha badan ee ay la nool yihiin bulshadan ku xidhan xabsiyada magaalada waa in la sameeyo cilmi- baadhis qoto-dheer lana abla-ableeyo cadaalad darada ay la nool yihiin bulshadani. Cilmi-baadhistani waxay daaha ka rogaysaa xaqiiqada dhabta ah oo ay ku sugan yihiin bulshadan maxaabiista ah.
Guud ahaan dadkan xabsiyada ku jira waa dad iskugu jira rag iyo dumar oo ku dhaqan deegaanda ay ka koobanyihiin mamulka koonfur galbeed. Waana dad loo heysto danbiyo kala duwan oo ay geysteen sida:
Dad loo heysto in Shabaab ka tirsanyihiin oo laga soo qabtey tuulooyinka ku hareereysan magaalada Baydhabo
Tuugo wax ka dhaca danyarta iyagoo adeegsanaya mindiyo
Dad caasi waalidiin ah oo ay soo xidheen waalidiintoodu
Dad isku haysta dhul ama beero
Dad deyn lagu leeyahay oo soo xidheen dadkii deynta ku lahaa
Dad si xaq darro ah lo soo xidhay oo aanay jirin wax lagu heysto
Ciidamada dowlada qeyb ka mid ah oo lagu heysto in la arkay iyagoo lacag sharci da-ro ah ka qaadaya dadka wata mooto bajaajyada ama takaasida yar yar
Dadka xabsiyada ku jira waa dad ay soo waajahaan cadaalad daro aad u adag, waxaanay isugu jiraan dad waaweyn, iyo dhalinyaro, waxaanay dadkani degenyihiin dhulka ku hareeraysan maamulka koonfur galbeed, waxa xusid mudan in dadkan xabsiyada ku jira ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah.
Cilmi baadhistani waxey inaga caawin doonta inan helno sida kor loogu qaado xaalada cadaaladeed ee dadka xabsiyada ku jira ee deegaanada koonfur galbeed inaga oo xooga saari doona su’aalaha kala ah:
Maxaa u sabab ah cadaalad daro loo geysanaaayo dadka xabsiyada ku jira?
Maxay yihiin noocyada cadaalad daro ee ay la kulmaan dadkas xabsiyada ku jira?
Sidee dadka xabsiyada ku jira u heli karaan xaalad cadaaladeed oo ku filan?
Muhiimada ay laheyd daraasadani waxay ahayd in kor loogu qaado xaalada cadaaladed ee dadka xabsiyada ku jira iyo in lagu bararujiyo dadka masuuliyiinta ka ah ilaalinta xabsiyada sidii maxaabiistaasi ay ku heli lahaayeen cadaalad waarta oo maxbuus walba ku qanacsanyahay iyo sidii loo heli lahaa xaqiiq walbo oo ka jirta xabsiyada kala duwan ee magaalada Baydhabo.
Sidoo kale ujeedada cilmi baadhistani waxay tahay in la adeegsado xogtan la helay si ay u noqo-to taageero iyo isbedel lagu hormarinaayo sharciyada xabsiyada ee ku aadan cadaalad darada ka dhanka ah dhammaan dadka maxaabiista ah.
Haddaba, si loo dhiso kalsoonida dadka xabsiyada ku jira waxa lagama maarmaan ah inay arkaan dad u guntaday isla markaana maalgalinaya waqtina ku bixinaya cilmi-baadhista lagaga waramayo xogaha daahsoon, si daaha looga rogo dhibta iyo cadaalad darada lagu hayo ama ka dhanka ah maxaabiista kala duwan si looga waantoobo loogana dheeraado wax kasta oo keeni karo xaalad cadaalad daro ah.